ShweMinThar: November 2016
အုန်းနို့ ​ခေါက်​ဆွဲ ~ မုန့်​ဟင်းခါး ~ ၀က်​သားတုတ်​ထိုး ~ ကြက်ရခိုင်ချက်
အုန်းနို့ ​ခေါက်​ဆွဲလေး အရင်ချက်စားကြမယ်
ပူပူ စပ်စပ် ကြက်ရခိုင်ချက်
သဘောင်္သား "ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင်" များနှင့် အလိမ်အညာသံသရာ
ဆိပ်ကမ်းကနေ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်တဲ့ စနစ်သစ်မှာ ဘာပြသနာဖြစ်နေလဲ
အစုအပြုံလိုက် သရဲသစ္ဆေပူးတာ ဘာကြောင့်လဲ
Sexual Harassment on the Buses
ဗိုက်ခေါက်အဆီ လက်တွေ့ကျကျ ချနည်း
(How to lose stubborn fat)
ဘယ်တစ်ယောက်များ ချရသိပ်ခက်တဲ့ ဗိုက်က တာယာပတ်၊ ဗိုက်ခေါက်ကို မချချင်သူ ရှိမလဲ။ဒါပေမယ့်လဲ နောက်ဆုံး ကျန်ခဲ့တဲ့ ဗိုက်အဆီဟာ ချလို့ကလဲမလွယ်၊ ကြိုးစား အဆီချလိုက်ရင်လဲ လူသာပိန်ကျသွားတယ်၊ ဗိုက်လုံးလေး ကျန်ခဲ့ရင်း ငပိန်ဗိုက်ပူ Skinny fat ဖြစ်သွားတတ်တာလဲ ခဏခဏပဲ မဟုတ်လား။
ဒီလိုချရခက်တဲ့၊ ခေါင်းသိပ်မာတဲ့ ဗိုက်အဆီကို ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ ချမလဲ ???
အိပ်ထမတင်တွေ၊ သံပုရာရည်တွေ၊ ခါးလှည့်တာတွေ စသဖြင့် ဘယ်လိုပဲ Onlineတွေ၊ Page တွေမှာ ပြောကြပြောကြ ဒါတွေဟာလဲ အဆင်မပြေခဲ့တာ အမှန်။ သတင်းမမှန်၊ အသိမမှန်ရင် ချဖို့မလွယ်ပဲ တဝဲလည်လည် ဖြစ်ဖို့သာများသည်။ ဖြစ်နေတာများသည်။ ရန်သူဆိုရင်တောင် ရန်သူ့ အကြောင်းနားလည်ဖို့ လိုသေးတယ် မဟုတ်လား။ ဒါ့ကြောင့်ပဲ ခေါင်းမာတဲ့ အဆီဟာ ဘာ့ကြောင့် ခေါင်းမာသလဲ၊ ဘယ်လိုနည်းတွေနဲ့ လုပ်ရင် ကျနိုင်သလဲ၊ ဘာ့ကြောင့်လဲ စသဖြင့် နားလည်နိုင်၊ လိုက်လုပ်နိုင်ဖို့ နည်းလမ်းတွေ ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ လွယ်ကူရင် လူကြိုက်တာမှန်ပေမယ့်လဲ လက်တွေ့ကျဖို့သာ အဓိကမို့ ထုံးစံအတိုင်း ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်ရအောင်။
ပထမအနေနဲ့ ဒီဆောင်းပါးမှာ ပြောမယ့် ဗိုက်ခေါက်အဆီဆိုတာ ဝတဲ့ သူတွေမှာ အများကြီးရှိနေသေးတဲ့ အဆီ အတွက် ပြောနေတာမဟုတ်။ ပိန်သင့်သလောက် ပိန်နေပေမယ့် ကျန်နေရစ်တဲ့ ချရခက်တဲ့ အဆီကို ဘယ်လိုနည်းတွေနဲ့ ချနိုင်သလဲဆိုတာကို ပြောမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဝနေသေးပြီး လက်ရှိ အဆီချနေတဲ့ လူတွေအတွက်လဲ သိသင့်တဲ့၊အဖိုးတန်တဲ့ အချက်တွေပါတာမို့ ဆက်ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
ဗိုက်က အဆီချဖို့ကြိုးစားမယ် ပြောလို့ နေရာကွက်ပြီး အဆီချနိုင်ပါတယ်လို့ ဆိုလိုနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ (အမှန်က နေရာကွက် အဆီချရင် ကျနိုင်ပေမယ့် လုံးဝမသိသာတဲ့ ပမာဏဖြစ်လို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာပါ၊စကားကပ်ပြောချင်သူများအတွက် ကြိုပြောထားတာ၊ အကျယ်တော့ ရှင်းမပြတော့ဘူးနော်) နေရာကွက် အဆီချဖို့ ကြိုးစားနေရင် အကျိုးမရှိဘူး ဆိုချင်တာပါ။ ဒါ့ကြောင့်လဲ ခါးဘေးက အဆီကျချင်ရင် ခါးလှည့်ပါ၊ အလေးတုံး ကိုင်ပြီး ဘယ်စောင်းလိုက်၊ ညာစောင်းလိုက် လုပ်ပါ စသဖြင့် ပြောလာခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးပဲဖြစ်ဖြစ် တွေ့ရင် ဆက်မဖတ်ပါနဲ့။ အကျိုးမရှိတဲ့ ဗဟုသုတဟာ အချိန်ကုန်စေရုံတင်မဟုတ် အမှားကြီးရင် ကြီးသလောက် ဒါဏ်ပါ ဖြစ်စေတတ်တယ် မဟုတ်လား။
ဟုတ်ပြီ၊ ဒါဆို ဗိုက်ကအဆီကို နေရာကွက်ချမယ်ပြောသလဲ ?? တကယ်တော့ ဗိုက်က အဆီဆိုတာ အကြမ်းဖျင်းပြောတာသာဖြစ်ပြီး ချရခက်တဲ့၊ ကျမလွယ်တဲ့ အဆီဆိုရင် ပိုမှန်ပါမယ်။ ယောင်္ကျားလေး တော်တေ်ာများများအတွက် ခေါင်းမာတဲ့ အဆီဟာ ဗိုက်ဘေးသား တစ်ဝိုက်ဖြစ်ပြီး တစ်ချို့ မိန်းကလေးတွေအတွက်တော့ တင်ပါး၊ ပေါင်၊ လက် စသဖြင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဆိုလိုရင်းက လူတော်တော်ပိန်နေပေမယ့် တစ်ချို့အစိတ်အပိုင်းက အဆီကို ချမရဖြစ်နေတတ်တဲ့ လူတွေ အတွက် ဒီဆောင်းပါးက လမ်းညွှန်ပေးမယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။
-Why stubborn fat is stubborn?-
ဘာလို့ ချရခက်တဲ့အဆီက တစ်ခြား အဆီတွေနဲ့ မတူ ချရသိပ်ခက်တာလဲ။
ဒီလိုချရခက်တဲ့ အဆီကို ချဖို့ဆိုရင် Dieting နဲ့ Exercise ဗဟုသုတက အရေးကြီးပါတယ်။ နေရာကွက် အဆီချတာက မဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ကျရခက်တဲ့ အဆီကို ချတာကတော့ ဖြစ်နိုင်ရုံတင်မက အောင်မြင်သွားတဲ့ လူတွေလဲ အများကြီးပါ။ ဒါပေမယ့် ဘာ့ကြောင့် ဘာကို လုပ်နေတာပါလဲဆိုတာတော့ သိဖို့လိုတာပေါ့။
အရင်ဆုံးသိသင့်တာက ဒီချရခက်တဲ့ အဆီဟာ သာမန် အဆီနဲ့ မတူပါဘူး။ ဥပမာ သာမန်အဆီ ဆိုတာမျိုးကို တခြား အတွင်း အစိတ်အပိုင်းတွေ (နှလုံး စသည်) မှာ ရှိကြပြီး ချရခက်တဲ့ အဆီဆိုတာမျိုးက အရေပြားနဲ့ တွဲလျက်အဆီဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဆီ ပုံစံချင်းလဲ မတူပါဘူး။ မတူလဲဆိုတာကို အကြမ်းဖျင်းနားလည်ဖို့ အတိုရှင်းပြပါမယ်။ အရှည်ကတော့ သိဖို့မလိုသလို အနည်းငယ်လဲ နားရှုပ်သွားနိုင်တာမို့ ချန်လိုက်ရပါကြောင်း။
အဆီချဖို့ လုပ်နေသူအတွက် အဆီဘာ့ကြောင့် ကျလဲဆိုတာ သိဖို့လိုပါတယ်။ အရင်ဆောင်းပါးတွေမှာ ပြောခဲ့သလို လှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာ သွေးလည်ပတ်ဖို့၊ ဓာတ်ပြုဖို့ နှလုံးက စွမ်းအင်လိုအပ်တယ်၊ ဒီစွမ်းအင်ကို အစာ၊ အဆီ၊ ကြွက်သားတွေဆီက ယူတယ် စသဖြင့် ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒီဖြစ်စဉ်ဟာ ပုံမှန်အဆီအတွက် လုံလောက်ပေမယ့် အခုပြောမယ့် Stubborn fat အတွက်က မလုံလောက်ပါဘူး။ ဒါ့ထက်ပိုပြီး အသေးစိတ်သိဖို့ အနည်းငယ် လိုအပ်လာပါပြီ။
အဆီဆိုတာ အိတ်လေးတွေပုံရှိတဲ့ Fat cell ဆိုပါစို့။ ဒီအဆီကို ကျဖို့ဆိုရင် အဆီဟာ Fat cell ကနေ တစ်ခြား ခန္ဓာကိုယ် အတွင်းမှာရှိတဲ့ Cell ဆီသွားမယ်၊ ပြီးရင် အဲဒီမှာဖြိုခွဲယူသုံးမယ်၊ ဒီလိုနဲ့ အဆီကျမယ်ပေါ့။
ဒီနေရာမှာ Fat cell ကနေ တခြားတစ်နေရာကို အဆီသွားဖို့အတွက် သွေးလည်ပတ်မှုလိုပါတယ်။ လွယ်လွယ်ပြောရရင် Tissues တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကြား အဆီအတွက်Transportation လိုတယ်ပေါ့။ ဒီ Transportation system ကောင်းလေ၊ အဆီကျဖို့ ပိုလွယ်လေလို့ မှတ်ပါ။
အဲဒီ Transportation system ရဲ့ ဇာတ်လိုက် ဟော်မုန်း ၂ခုက Noradrenaline နဲ့ Adrenaline ဖြစ်ပြီး ဒီ ဟော်မုန်း နှစ်ခုဟာ Alpha နဲ့ Beta လို့ ခေါ်တဲ့ အဆီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး System ကို ဖြစ်စေပါတယ်။ Alpha နဲ့ Beta အလုပ်ကပဲ အဆီကို Fat cells ကနေ တခြားနေရာမှာ သုံးဖို့ပါ။ Alpha က အဆီသယ်တာကို နှေးစေပြီး Beta က အဆီသယ်တာကို မြန်စေတယ်။ အလွယ်အနေနဲ့ Alpha များစေတဲ့ အရာတွေဟာ အဆီကျဖို့ မကောင်းဘူး မှတ်ပြီး Beta များစေတဲ့ အရာတွေဟာ ကောင်းတယ် စသဖြင့် သိရင်လုံလောက်ပါပြီ။
ဒါဆို ချရခက်တဲ့ အဆီဟာ Alpha များနေတယ် သိပြီဆိုပါစို့။ Alpha များတာကို တစ်နည်း အလွယ်ပြောရရင် ကားလမ်းကျပ်တယ်လို့ ပြောရမှာပဲ။ Fat cells ကို သယ်လာတဲ့ကားဟာ နေရာရွေ့လို့မရ၊ လမ်းပိတ်ပြီး အိမ်နားကနေကို မကျော်နိုင်သေး ဆိုတာမျိုး။ ဒါဟာ ချရခက်ခြင်းရဲ့ ပထမ အကြောင်းပြချက်။
နောက်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်တာကတော့ Stubborn fat ရှိတဲ့ နေရာတွေဟာ အပူဓာတ်ရဖို့ ခက်တာပါပဲ။ ပင်မကျောရိုးနဲ့ နီးလေ ကိုယ်တွင်း အပူဓာတ်ကောင်းလေဖြစ်ပြီး ခါးဘေးသား၊ တင်ပါး စသဖြင့်ဟာ ပင်မနဲ့ အဝေးကွာဆုံးနေရာမှာ ရှိပါတယ်။ ဝေးလေ၊ အနွေးဓာတ် သိပ်မရလေ၊ Fat cells တွေကြား သွေးလည်ပတ်မှု မကောင်းလေ၊ အဆီကျသွားဖို့ ခက်လေ၊ ဒီလိုကျတော့လဲ ရှင်းရှင်းလေး မဟုတ်လား။
ဒါ့ကြောင့်လဲ အပူခန်းတွေ၊ ချွေးထုတ်ခန်းတွေ (Sauna) စသဖြင့်သွားပြီး အဆီချဖို့ ကြိုးစားတာတွေ ရှိလာတာပါပဲ။ အထိရောက်ဆုံးနည်း မဟုတ်ပေမယ့် မှားတယ်လို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။ အနည်းဆုံး မသွားနိုင်လဲ ရေပူ ရေနွေးနဲ့ ချိုးပေါ့ဗျား။
ဒါဆို ပြန်ချုပ်ရင် Alpha များတဲ့ နေရာပတ်လည်ဟာ သွေးလည်ပတ်မှု မကောင်းလို့ အဆီကျဖို့ ခက်တယ်၊ ဒါ့ကြောင့် Alpha များစေမယ့် လုပ်ရပ်တွေကို ရှောင်ရမယ်ပေါ့။ ဒီလောက် ကိုယ့်ရန်သူကို နားလည်ရင် ဘယ်လို ရန်သူကို တိုက်နိုင်လဲဆိုတာ စလိုက်ကြရအောင်။
- ချရခက်တဲ့ အဆီကို ချဖို့ နည်းလမ်းများ-
၁။ Diet မလုပ်ပါနဲ့။
၂။ Diet လှည့်ကွက်သုံးပါ။
၃။ အချိန်ကိုက် အကျိုးရှိအောင် လုပ်ပါ။
၁။ Diet မလုပ်ပါနဲ့
ဟိုက်၊ ဘာတုန်းဟ လို့ အတွေးမစောပါနဲ့။ Diet ဆိုတာ ဘာ Diet ကိုဆိုလိုလဲ အရင်ကြည့်ကြစို့။
Diet - ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့် အစာစွမ်းအင် လျှော့စားခြင်း။
တစ်နည်းပြောရရင် သုံးတဲ့ စွမ်းအင် အထွက်ထပ် ဝင်တဲ့ အစာစွမ်းအင်ကို လျှော့စားခြင်းပေါ့။ စွမ်းအင်မလုံလောက်လေ၊ အဆီကျလေ သဘောကို ယူတယ်ပဲ ပြောရမှာပဲ။ ဒီလိုလုပ်လို့ အဆီမကျဘူးလား မေးရင် ကျတယ်၊ဒါပေမယ့် ချရခက်တဲ့ ဗိုက်ခေါက်ကို မကျစေဘူး လို့ဖြေရပါမယ်။ မှန်မမှန် သိချင်ရင် Diet လုပ်ပြီး အစာလျှော့စားတဲ့ လူတွေကို ကြည့်၊ ဗိုက်ချပ်ရပ်နေတာများ တွေ့ပါလားလို့။
Diet အကြောင်းပြောရင်၊ ဘက်ပေါင်းစုံက စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် ပြောမကုန်၊ ရေးမကုန်ပါဘူး။ တစ်ချို့ အကြောင်းအရာတွေ တော်တော်များများဟာ Online မှာ Fancy share တဲ့ Page တွေမှာ ဘယ်တော့မှ တွေ့နိုင်မှာ မဟုတ်သလို၊ Trainer အချို့တောင် သိမိမယ် မထင်ပါဘူး။ ဒီလောက်များပြားပေမယ့်လဲ အခုပြောမယ့် တစ်ချက်က အရေးပါတာကြောင့် ဒါလေးသိရင်ပဲ အတော်ခရီးရောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
- ဘာ့ကြောင့် Diet မလုပ်ရသလဲ-
အစာလျှော့ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်။ ဒီလိုလူတွေဆီက အများဆုံးကြားရမှာကတော့
" အစပိုင်း အဆင်ပြေပေမယ့် နောက်ပိုင်း မူးသလိုလို"
"အစပိုင်း အလေးချိန်ကျပေမယ့် နောက်ပိုင်း သိပ်မထူးတော့ဘူး "
ဒါအားလုံးရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ သိပ္ပံနည်းကျ အဖြေဆိုတာ ရှိပါတယ်။ မမေ့ပါနဲ့၊ Fitness ဆိုတာ မြန်မာပြည်မှာ အခုမှ စလိုက်စားတယ်ဆိုပေမယ့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာ ပိုက်ဆံပေါင်းများစွာသုံးပြီး သုတေသန ပြုထားပြီး၊ ပြုနေဆဲဆိုတာကိုပါပဲ။
အစာလျှော့ပြီး လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တဲ့အခါမှာ အလွယ်ပြောရရင် ခန္ဓာကိုယ်က ငတ်တဲ့ အဆင့်ကို ရောက်သွားတယ် ဆိုပါစို့။ တစ်ရက် ငတ်မလား၊ တစ်ပတ်ငတ်မလား၊ ငတ်ရင် အဆီကနေယူပြီး အဆီကျစေမယ်။ ပြသနာမရှိ။ ဒါပေမယ့် တစ်ပတ်ကနေ နှစ်ပတ်ဖြစ်လာရင် ပြသနာစရှိလာပါပြီ။ ဘာ့ကြောင့်လဲ ??
ခန္ဓာကိုယ် တည်ဆောက်ပုံ၊ အလုပ်လုပ်ပုံဟာ အပြင်လောကမှာ တီထွင်ထားတဲ့ ဘယ်စက်ထက်မဆို အဆင့်မြင့်ပါတယ်။ ငတ်လာတာ ကြာလာတဲ့အခါမှာ အစာခြေတဲ့ System ကို အမိန့်စာ ရောက်လာတယ် ဆိုပါစို့။
"တစ်နေ့တစ်နေ့ ထောက်ပံ့ငွေမလောက်ဘူး။ နဂို ၂ထောင်ဖိုး ပေးတာကနေ၊ အခု ၁ထောင်ဖိုးပဲ ပေးတော့တယ်။ ဒါ့ကြောင့် အရင်လို ၂ထောင်ဖိုးမလုပ်နဲ့၊ ၁ထောင်ဖိုးပဲ လုပ်တော့"
ဒီလိုအချိန်မှာ ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင် အရင်အစမှာ ၁ထောင် လျှော့လိုက်ပေမယ့် အဆီမှ ချေးငှါးလုပ်သေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်၂ပတ်လောက်ကြာတော့ ချေးငှါးလို့ အဆင်မပြေတော့ဘူး၊ ရှိတာနဲ့ပဲ နေတော့မယ် ဆိုတာမျိုး ဖြစ်လာတာပါပဲ။ ဒါနဲ့ပဲ အလေးချိန် မကျပဲ တန့်သွားတော့တာပါပဲ။ နောက်တစ်ခုက အစာလျှော့စားလေ ဟိုးအပေါ်က ပြောခဲ့တဲ့ Alpha တွေ များလာတတ်လေကြောင့်လဲ ကြာရင် ချရခက်လာတတ်တယ် ဆိုရမှာပါပဲ။
နောက်တစ်ချက်က Diet လုပ်စဉ် လုံလောက်အောင် မစားရတော့ အမြဲဗိုက်ဆာတတ်တာပါပဲ။ သင် ဘယ်လောက် အငတ်ခံနိုင်မလဲ။ တစ်လ၊ နှစ်လ ?? Bodybuilding ဒါမှမဟုတ် ကျန်းမာအောင် နေထိုင်တယ်ဆိုတာ တစ်ဘဝလုံးသွားသင့်တဲ့ အရာမျိုးပါ။ ကျန်းမာချင်သူက တစ်လထဲ ကောင်းကောင်းနေပြီး နောင် နှစ် ၂၀ပျက်စီးနေလို့ မရပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ရေရှည် ဖြစ်နိုင်မယ့် လမ်းမဟုတ်ရင် အောင်မြင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါ့ကြောင့် အငတ်ခံ တစ်လ၊ နှစ်လ အဆီချတဲ့သူဟာ ပြန်စားဖြစ်မှာပါပဲ။ မြေကြီးလက်ခတ်ရင်သာလွဲမယ်၊ ပြန်စားဖြစ်ရင် ဟိုးအရင် စားခဲ့တာထက်တောင် များတတ်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ကျခဲ့တဲ့ အဆီနည်းနည်းနေရာမှာ အများကြီးပြန်ဝလာ၊ ကိုယ့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ ဗိုက်ခေါက်ကျရေးဟာလဲ အိပ်မက်လေးပါပဲ ဖြစ်သွားတော့တာပဲဟုတ်။ ဒါ့ကြောင့် အစာလျှော့ပြီး လေ့ကျင့်ခန်း ရေရှည်လုပ်တဲ့ အကျင့်ကို ရှောင်ပါ။
Diet လုပ်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်း အပျော့စားလုပ်တဲ့သဘော။ အပျော့စားဆိုတာ မိနစ် ၂၀လောက် ပြေးတာ၊ ကြိုးခုန်တာ၊ကြက်တောင်ရိုက်၊ တအားဝသူဆို လမ်းလျှောက်တာ၊ Page ထဲက အဆီချ video အတိုင်း လုပ်တာ စသဖြင့် ကိုဆိုလိုပါတယ်။ အိမ်မှာဆိုလဲ ၁၅မိနစ်လောက် Cardio/Bodyweight လုပ်တယ်ပေါ့။
ဒီလိုလုပ်ပြီး အစာလျှော့စားတာက Dieting နဲ့ တူတူပါပဲ။ ရေတိုမှာ စွမ်းအင်မလောက်လို့ အဆီကချမယ်။ ဒါပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ရေတိုပဲလုပ်ပါ။ လျှော့စား၊ လျှော့လုပ်လို့ အတိုမှတ်ထားပါ။
အစာများစားတယ်ဆိုတာ ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီတဲ့၊ ဝစေမယ့် အစာတွေ စွပ်စားလို့ မပြောပါဘူး။ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီတဲ့၊ ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကောင်းတဲ့ အစာတွေလို့ ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ လုံလောက်အောင် များများစားပါလို့ ဆိုလိုပြီး ပိုလျှံအဆီထွက်အောင် စားပါလို့ မပြောပါ။ (ကောင်းမွန်သော အစားအစာ link ကို comment မှာကြည့်ပြီး မှီးနိုင်ပါတယ်)
လေ့ကျင့်ခန်းတွေက အလေးမတာ၊ Bodyweight ဒိုက်ထိုး၊ အိပ်ထမတင်၊ အလေးကိုင် ထိုင်ထ၊ အလေးမပါ ထိုင်ထ၊ ဒါမှမဟုတ် အပေါ်မှာပြောတဲ့ လျှော့လုပ်ပါဆိုတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုပဲ ပိုကြာကြာ၊ ပိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်ပါ။
ဒီလို ပိုစား၊ပိုလုပ်ရင် ဘာဖြစ်သလဲဆိုတော့ လေ့ကျင့်ခန်း ကြောင့် ကြွက်သားအသစ်တည်ဆောက်တဲ့အခါ စွမ်းအင်လုံလောက်အောင်ရမယ်။ ခန္ဓာကိုယ်လဲ စိတ်ချမ်းသာပြီး လျှော့စား၊ လျှော့လုပ်တုန်းက စိတ်ညစ်ခဲ့သမျှတွေကို မေ့ပျောက်သွားမယ်။ တစ်ချက်ခုန် နှစ်ချက်ပျက်မို့ Dieting လှည့်ကွက်လို့ ခေါ်တာပါပဲ။ လုပ်တဲ့လူ ကိုယ်တိုင်လဲ ကောင်းကောင်းပြန်စားရတာမို့ စိတ်ချမ်းသာမှာပဲဟုတ်။
ဒီ လျှော့စား လျှော့လုပ် နဲ့ ပိုစား ပိုလုပ်နည်းကို နှစ်ရက်ခြား တစ်ခါ ပြောင်းနိုင်သလို၊ တစ်ပတ်ခြားတစ်ခါလဲ ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ အလွယ်ပြောရရင် လေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်နိုင်တဲ့ ရက်၊ Gym မသွားနိုင်တဲ့ရက် လျှော့စား၊ လုပ်တာများတဲ့ရက် ပိုစားပေါ့။
လေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်တဲ့ရက် မများစေနဲ့၊ ပိုစား ရက်မှာ လုံလောက်အောင်ထက် အများကြီး ပိုမစားနဲ့။ ဒါသိရင် သင့်ဗိုက်ကြာကြာ မခံပါဘူး။
၃။ အချိန်ကိုက် အကျိုးရှိအောင်လုပ်ပါ။
ဗိုက်ခေါက်ကို အနိုင်ယူတဲ့အခါ ပိုလွယ်အောင် အချိန်ကို အသုံးချနိုင်ပါတယ်။
အရင်ဆုံး ပိုစား၊ ပိုလုပ်ရက်မှာ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပြီးပြီဆိုပါစို့။ နောက်တစ်ရက်မှာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ အစီအစဉ် မရှိရင် လျှော့စား လျှော့လုပ် နေမယ်ပေါ့။
ဒီအချိန်မှာ မနေ့က လုပ်ထားတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း အရှိန်ကြောင့် အဆီတွေလောင်ကျွမ်းနေအုန်းမှာပဲ။ ဒါကို အကျိုးရှိအောင် သုံးဖို့ဆိုရင် လျှော့စားတဲ့ရက်မှာ အစာ စွမ်းအင်လျော့စေဖို့ ကြိုးစားနိုင်သလို အစာခြေဖျက်အား မြန်ဖို့လဲ ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။
အစာစွမ်းအင်လျှော့ဖို့က နေ့စဉ်စားနေကျထဲက စွမ်းအင်များပြီး အဆီပိုစေမယ့် ထမင်းကိုလျှော့၊ ထမင်းအစား အရွက်၊ အသားပိုစားလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အစာခြေဖျက်အားကောင်းစေချင်ရင်တော့ Green tea၊ လက်ဖက်ခြောက်ရည်၊ သံပုရာရည် စသည်တို့ သောက်ပြီး ပိုမို အစာခြေမြန်စေနိုင်ပါတယ်။
- နေရာကွက် အဆီချလို့မရပါဘူး။
- လူပိန်ပေမယ့် ချရခက်တဲ့ အဆီဟာ သာမန် အဆီတွေနဲ့ မတူပါဘူး။
- ချွေးထုတ်ခန်း၊ ရေပူရေနွေးနဲ့ ချိုးတာဟာ အဆီကျဖို့ အနည်းငယ် (ထောက်ပံ့တယ်ဆိုပိုမှန်) ဖြစ်စေပါတယ်။
- Dieting ရေရှည် မလုပ်ပါနဲ့။
- လျှော့စား လျှော့လုပ်၊ ပိုစားပိုလုပ် နည်းကိုသုံးပါ။
- လျှော့စား လျှော့လုပ်၊ ပိုစားပိုလုပ်တဲ့အခါ ရက်အပေါ် မူတည်ပြီး အစာကို အသုံးချပါ။
- အဝလွန်သူများလဲ ချရခက်တဲ့ အဆီမဟုတ်သေးပေမယ့် ချရလွယ်တဲ့ အဆီကို ချဖို့ကြိုးစားချင်ရင် ဒီနည်းအတိုင်း လိုက်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါပါပဲ။ ခေါင်းမာတဲ့ အရှုံးပေးခက်တဲ့ ရန်သူကို ရင်ဆိုင်ရာမှာ စနစ်တကျ နည်းတွေ လိုပါတယ်။ လက်တွေ့မကျ ဟိုယောင် ဒီယောင် စမ်းရင်း လုပ်နေတာထက်စာရင် လက်တွေ့ကျကျလုပ်မှသာ ရလဒ်ကို ရရှိနိုင်မှာဟုတ်။
ဒီနည်းလေးတွေကို လုပ်နေကျနည်းလေးတွေမှာ ပေါင်းထည့်ပြီး လုပ်ရင်း ဗိုက်ချပ်နိုင်ကြပါစေ။
Credit: Golden Dream
Posted by Alex Aung at 2:44 PM No comments:
Labels: ၀ိတ်ချနည်းများ, Beauty Tips, Health
ကျနော့်အတွက်ကတော့ ရှော့ဖြစ်တာပေါ့ – တာဝန်မှရပ်စဲခံရသည့် စိုက်/မွေးဒုဝန်ကြီး
နုတ်ထွက်စာတင်ဖို့ ဦးဝင်းထိန်က လာပြောတယ် – တာဝန်မှရပ်စဲခံရသည့် စိုက်/မွေးဒုဝန်ကြီး
ခန္ဓာကိုယ်ထဲရှိ သွေးအကြောင်းသင်ဘယ်လောက်သိလဲဆိုတဲ့ Quiz လေးကို
Good Health ဂျာနယ်မှာ တစ်ခါရေးဖူးပြီးပါပြီ။ အခုတစ်ခါမှာတော့
သွေးအမျိုး အစားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင်ဘယ်လောက်သိလဲဆိုတာ
((1)) သွေးကို အဓိကအားဖြင့် အမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးခွဲခြား ထားပါသလဲ။
◘ (ခ) လေးမျိုး
သွေးမှာ အေသွေး၊ ဘီသွေး၊ အေဘီသွေးနဲ့ အိုသွေးဆို ပြီး အမျိုးအစားလေးမျိုးရှိပါတယ်။ သွေးနီဥမျက်နှာပြင် ပေါ်ရှိ Antigen (ပဋိလှုံ့ပစ္စည်း)လို့ ခေါ်တဲ့ ပရိုတင်းပမာဏ အနည်းငယ်ပေါ်မူတည်ပြီး လူတစ်ယောက်ရဲ့ သွေးအမျိုး အစားကွဲပြားသွားတာပါ။ သင့်မှာ A ပဋိလှုံ့ပစ္စည်းပါနေရင် သွေးအမျိုးအစားက A ဖြစ်ပြီး B ပဋိလှုံ့ပစ်္စည်းရှိနေရင်တော့ B သွေးပါ။ A ရော B ပါ ပါနေရင် AB သွေးဖြစ်ပြီး ပဋိလှုံ့ ပစ္စည်းမပါရင် သွေးအမျိုးအစားက O သွေးဖြစ်နေမှာပါ။
((2)) သွေးအမျိုးအစားမှာကြားဖူးနေကျ Rh ဆိုတာ . . .
(ခ) သွေးနီဥအရေအတွက် ပမာဏ
(ဂ) ပဋိလှုံ့ပစ်္စည်း(Antigen) နောက်တစ်မျိုး
◘ (ဂ) ပဋိလှုံ့ပစ္စည်း (Antigen) နောက်တစ်မျိုး
သင်ရဲ့ သွေးနီဥထဲမှာ ဒီပဋိလှုံ့ ပစ္စည်းရှိနေပါက သွေးအမျိုးအစားက Positive (အပေါင်း)အမျိုး အစားပါ။ မရှိရင်တော့ Negative (အနုတ်)အမျိုးအစားပါ။ ဥပမာအားဖြင့် သင့်သွေးနီဥမှာ ပဋိလှုံ့ပစ္စည်း A ရော Rh factor ပါရှိရင် သင့်သွေးအမျိုးအစားက A Positive ဖြစ်နေမှာပါ။ သင့်မှာ ပဋိလှုံ့ပစ္စည်း B ရှိပေမယ့် Rh Factor ရှိမနေရင်တော့ သွေးအမျိုးအစားက B Negative ပါ။ သွေးစစ်လိုက်ရင် သင့်သွေးအမျိုးအစားကို အလွယ်တကူသိရှိနိုင်မှာပါ။
((3)) ဘယ်သွေးအမျိုးအစားပိုင်ရှင်က နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေလျော့
◘ (ဂ) အို
အိုသွေးက အများဆုံးတွေ့ရလေ့ ရှိတဲ့ သွေးအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ အနည်းဆုံးပါ။ အေဘီသွေးကတော့ အရှားပါး ဆုံး သွေးအမျိုးအစားဖြစ်ကာ နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေအများဆုံးပါ။
((4)) ဘယ်သွေးအမျိုးအစားပိုင်ရှင်တွေက မှတ်ဉာဏ်နဲ့ ပတ်သက် ပြီး ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ များနေပါသလဲ။
◘ (ဂ) အေဘီ
တခြားသွေးအမျိုးအစားတွေနဲ့ယှဉ်ရင် အေဘီသွေးဟာ စိတ် ကစဉ့်ကလျားရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ ၈၂ ရာခိုင်နှုန်းပိုများနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက် အိုသွေးကတော့ ဖြစ်နိုင်ခြေအနည်းဆုံးပါ။
((၅)) ဘယ်သွေးအမျိုးအစားက ဘယ်သူ့ကိုမဆို လှူလို့ရပါသလဲ။
(က) O Negative
(ခ) O Positive
(ဂ) A Positive
◘ (က) O Negative
သွေးသွင်းဖို့လိုအပ်လာပြီဆိုရင် သွေးလှူရှင်နဲ့သွေးသွင်းဖို့လို အပ်သူနှစ်ဦးသွေးအမျိုးအစားတူညီဖို့လိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရေး တကြီး သွေးလိုအပ်တဲ့အခါမျိုးမှာ O Negative သွေးအမျိုးအစား ဟာ ဘယ်သွေးပိုင်ရှင်ထံမဆိုသွင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ O Negative သွေးမှာ ပဋိလှုံ့ပစ္စည်း A, B နဲ့ Rh factor တွေမရှိတာကြောင့် တခြားသွေးတွေထဲ ၀င်ရောက်တဲ့အခါ ပြဿနာ မရှိတာပါ။
((၆)) ဘယ်သွေးအမျိုးအစားက ဘယ်သူ့ဆီကမဆို သွေးအလှူခံ နိုင်သလဲ။
(က) AB Positive
(ခ) AB Negative
(ဂ) O Positive
◘ (က) AB Positive
ဒီသွေးအမျိုးအစားကိုတော့ ဘယ်သွေးမဆို လှူဒါန်းနိုင်တာကြောင့် Universal Recipientလို့ သိထားကြပါတယ်။ AB Positive သွေးမှာ ပဋိလှုံ့ပစ္စည်း A, B eJY Rh factor တွေအားလုံး ပါဝင်နေတာကြောင့် တခြားသွေးတွေ ၀င်လာတဲ့အခါမှာလည်း ခန္ဓာကိုယ်က သူ့သွေးလို သဘောထားကာ အဆင်ပြေနေတာပါ။
((၇)) သွေးအမျိုးအစားအလိုက် အစားအစာ ရှောင်မယ်ဆိုရင် ၀ိတ်လျှော့ဖို့ ပိုလွယ်စေပါတယ်။
◘ (ခ) မှား
ဒီအကြောင်း ကြားဖူးကောင်း ကြားဖူးကြမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီ အချက်ကို သက်သေပြနိုင်တဲ့ သက်သေသာဓက မရှိ သေးပါဘူး။ ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သုတေသနရေရေရာရာ လုပ်ထားတာမျိုး မရှိကြောင်းပါ။
((၈)) ဘယ်အရာက ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရာမှာပြဿနာတက် နိုင်ပါသလဲ။
(က) Rh Negative
(ခ) Rh Positive
◘ (က) Rh Negative
ကိုယ်ဝန်သည်မိခင်ရဲ့ သွေးက Rh Negative ဖြစ်နေပြီး ၀မ်းထဲက ရင်သွေးလေးရဲ့ သွေးက Rh Positive ဖြစ်နေပါက မိခင်သွေးက ရင်သွေးငယ်ရဲ့သွေးဆဲလ်တွေကို တိုက်ခိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကို Rhesus (ရီးဆက်စ်) ရောဂါလို့ခေါ်ပြီး ဆေးဝါးနဲ့ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ် ၀န်ဆောင်ချိန်မှာ Rh အမျိုးအစားကို သွေးစစ်ကြည့်ပြီး Rh Negative ဖြစ်နေပါက စိတ်ချရအောင် ဆရာဝန်ညွှန် ကြားတဲ့ဆေး သောက်ပေးသင့်ပါတယ်။
Posted by Alex Aung at 11:46 AM No comments:
Posted by Alex Aung at 1:00 PM No comments:
တနည်းအားဖြင့် သဗ္ဗညုဗုဒ္ဓ၊ ပစ္စေကဗုဒ္ဓ၊ စတုသစ္စ ဗုဒ္ဓနှင့် သုတဗုဒ္ဓ ဟူ၍ ဗုဒ္ဓ(ဘုရား) လေးမျိုး ရှိသည်တွင် မြတ်စွာဘုရားကို သဗ္ဗညု ဗုဒ္ဓခေါ်သည်၊ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါကို ပစ္စေကဗုဒ္ဓဟု ခေါ်၍ ရဟန္တာ သာဝကများကို စတုသစ္စဗုဒ္ဓ ဟုခေါ်သည်၊ အကြားအမြင် များ၍ ကျမ်းဂန် တတ်ကျွမ်း သောရဟန်းကို သုတဗုဒ္ဓခေါ်၏။ ဤအလို ဘုရားမှာ သဗ္ဗညု ဗုဒ္ဓ၊ ရဟန္တာမှာ စတုသစ္စဗုဒ္ဓ ဖြစ်၍ သဗ္ဗညု ဗုဒ္ဓ တစ်ဆူနှင့် စတုသစ္စ ဗုဒ္ဓရှစ်ဆူကို ဗုဒ္ဓကိုးဆူ (ဝါ) ဘုရားကိုးဆူဟု ဆိုရပေလိမ့်မည်။
ဘုရားတစ်ဆူနှင့် ရဟန္တာရှစ်ဆူကို ပေါင်းစု၍ ပူဇော်ခြင်း အစဉ်အလာမှာ မည်သို့ ဆင်းသက်လာသော အစဉ်အလာ တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ဗုဒ္ဓစာပေ ကျမ်းဂန် အကိုးအကား အထောက်အထားနှင့် ခိုင်ခိုင်မာမာ ဖော်ပြစရာ မရှိပါချေ၊ စဉ်းငယ် တူယောင်ယိုးမှား အနေဖြင့်သော် ဓမ္မပဒလာ အာယုဝဎုနသ တို့သားဝတ္ထုကို ထုတ်ပြစရာ ရှိပေသည်။
ဝတ္ထုမှာ မြတ်စွာဘုရား ဒီဃလ င်္ဂိက မြို့ကို အမှီပြု၍ သီတင်းသုံးစဉ် ပုဏ္ဏားတစ်ယောက်သည် (၇) ရက်မျှသာ အသက်ရှည် လတ္တံသော သားငယ်အတွက် မြတ်စွာဘုရား နှင့်တကွ ရဟန္တာရှစ်ပါး (ရံခါ- တစ်ဆယ့် ခြောက်ပါး) တို့ကို ပင့်ဖိတ်၍ (၇) ရက်ပတ်လုံး ပရိတ်တော် နာယူသဖြင့် သားသူငယ် အသက် ၁၂၀ အထိ ရှည်စွာနေရကြောင်း လာရှိ၏။ ထိုဝတ္ထုမူရင်း ဓမ္မပဒအဋ္ဌ ကထာတွင် ရဟန္တာရှစ်ပါး သာမဟုတ်၊ “အဋ္ဌဝါ သောဠ သဝါ” ရှစ်ပါးသော်၎င်း တစ်ဆယ့်ခြောက်ပါး သော်၎င်းဟု ဆိုထားသည်။ ရှစ်ပါး ကြွရောက်ရာ ၌လည်း ဘွဲ့မည်မပါ၊ ရှစ်ပါး သာမန်သာ ဖြစ်၏။
ယခုမျက်မြင် ဘုရားကိုးဆူ ပူဇော်ရာ၌ -
(၁) ဘုရားကို ဗဟိုထား၍ -
(၂) တောင်ဖက်က အရှင်သာရိပုတ္တရာ -
(၃) မြောက်ဖက်က အရှင်မဟာ မောဂ္ဂလာန်၊
(၄) အရှေ့က အရှင်ကောဏ္ဍည၊
(၅) အနောက်က အရှင်အာနန္ဒာ၊
(၆) အရှေ့တောင်က အရှင်ရေဝတ၊
(၇) အရှေ့မြောက်က အရှင်ရာဟုလာ၊
(၈) အနောက်တောင်က အရှင်ဥပါလိ၊
(၉) အနောက်မြောက်က အရှင်ဂဝမ္ပတိ-
ဟူ၍ ဘွဲ့တော်နှင့် အရပ်မျက်နှာ အတည်အမြဲ စီစဉ် ချက်ထားရှိ လေသည်။
ပါဠိစာပေ ပိဋကကျမ်းဂန် တို့တွင် မြတ်စွာဘုရားနှင့် တကွ ဤရဟန္တာ (၈) ပါးတစ်နေရာတည်း စုရုံး သီတင်းသုံး၍ အပူဇော်ခံခဲ့ကြောင်း တစ်စွန်း တစ်စမျှ မပါရှိသဖြင့် ကိုးပါးစဉ်ပုံ နေရာချထားပုံများမှာ လောကီ ရေးဆံဆံ စီစဉ်ချထားခြင်းသာ ဖြစ်နိုင်ပေသည်။
တစ်ခါက ဤစာစောင်တွင် ဆောင်းပါး တစ်ခု၌ ဘုရားကိုးဆူ ပူဇော်ပွဲ ပေါ်ပေါက်လာပုံကို စာရေးသူ ဖော်ပြ ခဲ့ဘူးသည်။ ၉၁၄ - ခုနှစ် နန်းတက်တော်မူသော ဟံသာ ဝတီ ဆင်ဖြူရှင် (ဘုရင့်နောင်) မင်းတရားကြီး လက်ထက် ဇင်းမယ်ကို သိမ်းပိုက်ပြီးနောက် ၉၂၀ ခန့်တွင် သားတော် အနော်ရထာ စောကို ဇင်းမယ် ဘုရင်ခံခန့်သည်၊ ထိုအခါ ဇင်းမယ်၌ ဂြိုလ်ကိုးလုံး ပူဇော်မှု အစဉ်အလာရှိနေရာ အနော်ရထာစောက ထိုအစဉ်အလာကို ဗုဒ္ဓယဉ်ကျေးမှု ဖက်သို့ဆွဲ၍ ဘုရားကိုးဆူ ပူဇော်မှုအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးခဲ့ကြောင်း၊ ထိုအခါမှစ၍ ဇင်းမယ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံပါ ဘုရားကိုးဆူ ပူဇော်မှုအစဉ်အလာ ပြန့်ပွား ခဲ့ကြောင်းဖြင့် ဖော်ပြခဲ့ဘူး၏။
ဂြိုလ်ကြီး ကိုးပါးပူဇော်ရာ၌ ဗေဒင်နည်း စနစ်ကိုမှီး၍ မည်သည့် ဂြိုလ် မည်သည့် အရပ်ဟူသော အစီအစဉ် ရှိသလို ရဟန္တာ ရှစ်ပါးကိုလည်း စနစ်တကျ နေရာချထားရန် လိုမည် သာဖြစ်သည်၊ ထိုအတွက် လောကီပညာ ရှင်တို့သည် လောကကြောင်း ဓမ္မကြောင်းတို့နှင့် ညှိနှိုင်းတိုက်ဆိုင်၍ သင့်တန်အောင် ကြံစည်ခဲ့ကြ မည်သာ ဖြစ်သည်။ အရပ်မျက်နှာနှင့် ကိုက်ညီအောင် ရဟန္တာ ပုဂ္ဂိုလ် အမည် အဝါ ရွေးချယ်ရာ၌လည်း လောကဓမ္မနှင့် ညီညွတ်ရန် အရေးကြီးပေသည်။
မြတ်စွာဘုရားကို ဗဟို၌ ထားရမည်ကား မလွဲမရှောင် သာသော နေရာချထားမှု ဖြစ်သည့်အတိုင်း ဘုရားပွင့်တော် မူစ (သို့မဟုတ်) များသောအားဖြင့် ဘုရားမြတ်စွာသည် အရှေ့သို့ မျက်နှာလှည့်၍ှ သီတင်းသုံးတော် မူလေ့ရှိ သဖြင့် ဘုရားကို ပလ္လင်ပေါ်က ရှေ့သို့ လှည့်၍ ထားလျှင် လက်ျားဘက် တောင်အရပ်သည်၊ လက်ျာရံ အရှင်မြတ် သာရိပုတ္တရာ၏ နေရာတော် ဖြစ်ပေမည်။ လက်ဝဲဘက်မြောက် မျက်နှာသည် လက်ဝဲတော်ရံ အရှင်မဟာ မောဂ္ဂလာန်၏ နေရာတော် ဖြစ်ပြီး နောက်သက်တော် အကြီးဆုံး အရှင်ကောဏ္ဍညကို ဘုရားရှေ့ တည့်တည့် အရှေ့မျက်နှာမှ ထားရမည်ဖြစ်၏။ အလုပ်အကျွေး နောက်တော်ပါ အရှင်အာနန္ဒာကား မုချမြတ်စွာ ဘုရား၏ ကျောဖက် အနောက်မျက်နှာ၌ ရှိရပေမည်။
ကျန်ရဟန္တာ လေးပါးနှင့် အရပ်မျက်နှာ ချထားမှုကား မည်သို့နည်း။
ဘုရားနေရာတော်နှင့် ဖော်ပြပါရဟန္တာ လေးပါးအတွက် နေရာ တော်တို့ကို ဓမ္မကြောင်း သက်သက်ဖြင့် အထက်ပါ အတိုင်း ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး ကျန်ရဟန္တာ လေးပါးနှင့် နေရာရွေးချယ်ပုံမှာ လောကကြောင်း များစွာ နွယ်သွားလေသည်။ အရှေ့မြောက် မျက်နှာသည် တနင်္ဂနွေ ဂြိုလ်ရှိရာ အရပ်ဖြစ်၏။ ဂြိုလ် (၈)လုံးတွင် တနင်္ဂနွေ ဂြိုလ်သည် ဂြိုလ်သက် အနည်းဆုံး ဖြစ်လေသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုအရပ်၌အသက် အငယ်ဆုံး ရဟန္တာကို ရွေးချယ်၍
နေရာချထားပေးရာ ထိုနေရာသည် အရှင်ရာဟုလာ၏ နေရာ ဖြစ်လာရလေသည်။
အရှင်ရေဝတသည် အရှင် သာရိပုတ္တရာ၏ ညီငယ်ဖြစ်၏။ ညီငယ်သည် နောင်တော် အနီး၌ နေသင့်ပေသည်။ ထို့ကြောင့် ပြည့်ရှင်မင်း အနီး၌ အိမ်ရှေ့မင်း ကိုထားရ သကဲ့သို့ အရှင်သာရိ ပုတ္တရာနှင့် နီးရာ ရှေ့တောင် အရပ်၌ အရှင်ရေဝတကို ချထားရလေသည်။ အရှင် ဥပါလိသည် ဝိနည်းဆောင် ဧတဒဂ်ရ ဝိနည်းဓိုရ် ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်ရာ ဤဘုရား လက်ထက်တွင် ဝိနိစ္ဆယ တရားသူကြီး တစ်ဦးပင်ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် အရှင်ဥပါလိကို နေရာချ ထားရာ၌ လောကီကျမ်းတို့တွင် စနေဂြိုလ်သည် တရားဆုံး ဖြတ်တတ်သော ဝိနိစ္ဆယ အမတ်ကြီးဖြစ်ခဲ့ ဘူးသည်ဟု လာရှိသဖြင့် အရှင်ပါလိ အတွက် နေရာသည် စနေထောင့် အရပ်ဖြစ်လာ ရပေသည်။
အရှင်ဂဝမ္ပတိနှင့် အနောက်မြောက် အရပ်ကား သဒ္ဒါကျမ်းနှင့် ဆက်ဆံနေပေသည်၊ ဂဝမ္ပတိမှာ “ဂုန္နံပတိ ဂဝမ္ပတိ” (နွားတို့၏ အရှင်)ဟု ဝိဂြိုလ် ဆိုရသည်၊ ဂေါသဒ္ဒါသည် ပသုသဒ္ဒါနှင့် အတူ နွားကိုဟောသည်၊ ပသုသဒ္ဒါသည် နွားကိုလည်းဟောသည်၊ ရာဟုဂြိုလ်ကိုလည်း ဟောသည်၊ ထို့ကြောင့် ဂုန္နံပတိ ဂဝမ္ပတိ ဟူသော ဝိဂြိုလ်ကို နွားတို့၏ အရှင်ဟူ၍ သာမက ရာဟုဂြိုလ် တို့၏ အရှင်ဟူ၍လည်း အနက်ဆို နိုင်လေသည်။ သို့ဖြစ်၍ အရှင်ဂဝမ္ပတိ၏ နေရာတော်သည် ရာဟုထောင့် ဖြစ်သော အနောက်မြောက် အရပ် ဖြစ်ပေသည်။
သို့ဖြစ်၍ စာဟောင်းပေဟောင်း ကျမ်းဂန် အထူးမှ လာသော ဤရဟန္တာ ရှစ်ပါးအတွက် နေရာတော် ချထားခြင်းမှာ ပညာရှင် တို့၏ စိန္တာမယ ဥာဏ်ပေါ်၌ တည်ရှိပေသည်၊ တနည်းမှာလည်း ရဟန္တာ မြောက်မြား စွာရှိပါလျက် (၈) ပါးကို ရွေးကောက်ထား ခြင်းမှာ ဤရှစ်ပါး သည်သာ ပြဆိုခဲ့သည့် အတိုင်း အရပ်ရှစ်မျက်နှာ နှင့် ဆီလျော်ကိုက် ညီနေသောကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ဖြေဆိုရပေ သတည်း။
Labels: News and Info, ဘာသာရေးဆောင်းပါး
မြန်မာ့ဂီတလောက၊ အိမ်ခြံမြေ၀န်ဆောင်မှုဥပဒေ၊ NCA စာချုပ်တစ်နှစ်အလွန်
ဂျာအေး သူ့အမေရိုက် မုန့်လုံးစက္ကူကပ် " မြန်မာ့ဂီတလောက
အိမ်ခြံမြေ၀န်ဆောင်မှုဥပဒေထွက်ပေါ်လာဖို့ လုပ်ဆောင်နေ၊ ဥပဒေက ဘာအတွက်လဲ
NCA စာချုပ် တစ်နှစ်ပြည့်အလွန် မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးအခြေအနေ (အပိုင်း-၁)
NCA စာချုပ် တစ်နှစ်ပြည့်အလွန် မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးအခြေအနေ (အပိုင်း-၂)
Mizzima Dialogue TV Show
Posted by Alex Aung at 7:43 AM No comments: